Akhriso: Cudurka Lafaha Iyo Sida Loo Daaweeyo – Goobjoog News
Akhriso: Cudurka Lafaha Iyo Sida Loo Daaweeyo
Cudurka Lafaha: waa cudur Asalkiisa uu ka yimaado cudurka loo yaqaano Tiibeyda waana cudur ku dhaca lafaha kala goysyada jirka, qofka uu ku dhacana waa uu jiiseeyaa dadka qaar na waxa uu uyeelaa tuur ama goobo sida hadba aad utaqaano sidoo kale cudurka lafaha waxaa kaloo loo yaqaanaa magaca ah Gasar .
Nuucyada uu leeyahy cudurka lafaha
Cudurka lafaha waxa uu leeyahay nuucyo badan waxaana ugu caansan nuucyadiisa kamid:
Cudurka mid waxa uu gala lafaha dadka waana uu qaloociyaa lafaha qofka waxa uuna u yeelaa tuur.
Midana waxa uu gala sanbabada oo nuucaan waa la is qabasiiyaa oo waa la isku daartaa sidoo kale waxa uu ku gudbaa neefta qofka.
Daawooyinka loo isticmaalo cudurka lafaha
Cudurkaan waxa uu leeyahy daawooyin caadi ah iyo kuwo dhaqameed waxaana ka mida daawooyinkaas:
Cudurka lafaha dadka ku nool baadiyaha waxay u yaqaanaan magaca ah Faje fajahaan waxa uu leeyahy oo lagu daaweeyaa Dab iyo
Cudurka lafaha dadka ku nool magaalada waxay u yaqaaniin magaca ah Gasar waxaana lagu daaweeyaa Dabka.
Waxyaabaha Sababa Cudurka lafaha
Cudurkaan wax sabab ah malahan waa mid rabaani ah oo dabiiciya waxa uuna ka yimaadaa xagga alle marka cudurkaan wax sababo malahan .
Calaamadaha lagu garto cudurka lafa xanuunka
Cudurka lafa xanuunka waxa uu leeyahay calaamado badan oo lagu garto ama lagu ogaado qofka inuu qabo cudurka lafaha waxaana ka mida:
Iney qofka labadiisa gacmood ay soo ko gaan ama ay soolaammaan .
Iney qoorta qofka ay hoos u laabato .
Inuu qofka uu dareemo tabar yari badan.
Sida looga hortagi karo cudurka lafaha
Cudurkaan waa laga hortagi karaa durbaba markii qofka lagu arko calaamadihiisa iyo astaamahiisa waxaana looga hortagi karaa in qofka lasiiyo daawada Rifeetar yurub ah ayaa lasiinaa waana daawo difaac xooggan leh .
Madaafiic Kusoo Dhacday Xaafado Ka Tirsan Degmada Warta Nabadda Ee Muqdisho